Umbhali uJoan Wester Anderson uthetha ngeentumwa zeentlanganiso
Abantu abajikeleze ihlabathi bafaka ubungqina bokuthi bazange baxelele, ukuhlangana kwabantu kunye nezidalwa abazikholelwa ukuba ziingelosi. Umbhali othengisa kakhulu uJoan Wester Anderson unika umbono wakhe
UJOAN WESTER U-ANDERSON ungomnye wabalobi abakhulu baseMerika kwizinto ezihlangene namava kunye neengelosi-umsebenzi ophefumulelwe yintombi yomntwana wakhe (jonga iphepha 2). Iincwadi zakhe ezininzi, kuquka iiNgelosi, iMimangaliso, kunye neZulwini emhlabeni , iiNgelosi kunye nemibuzo: Iindaba eziNyaniso zezulu emhlabeni kunye neNgelosi yokubukela kwam Iindaba ezilungileyo zeNtlanganiso yezingane kunye neengelosi, ziye zithengisa kakhulu. Kule dliwano-ndlebe, uJoan unikela ngombono wakhe kwiimeko zeengelosi, injongo yazo kunye nolwalamano nabantu, kunye nezinye izinto ezimangalisayo.
Iyintoni intsingiselo yakho yeengelosi? Ngaba zizinto zomoya zoqobo okanye ngaba ngabantu abadlule?
Nangona kukholelwa ukuba iingelosi ziyingcinga zabantu abafayo, oku akunjalo. Zonke iinkonzo zaseNtshona - ubuYuda, ubuKrestu kunye ne-Islam - zifundisa ukuba iingelosi zidalwa ngokuzimeleyo, zize zingabi ngabantu, nangona zikwazi ukuthatha abantu ngokukhawuleza xa kwaye uThixo ufuna ukuba benze njalo. Xa abantu befa, ngokwemiqathango efanayo, bafana neengelosi-oko kukuthi, imimoya engenamzimba. Ixesha elifanelekileyo leli qela "ingcwele."
Luphi ubudlelwane phakathi kweengelosi kunye noluntu?
Banikwa abantu njengabathunywa (igama elithi "ingelosi" lithetha "isithunywa" ngesiHebhere nangesiGrike) kunye nabagcini. Ezinye izikolo zengcamango zikholelwa ukuba umntu ngamnye unikwe ingelosi yakhe ngexesha lokudala, kwaye eso sithunywa sihlala kunye nentlawulo yakhe de kube sekufeni. Kweminye imfundiso, iingelosi azikho enye, kodwa ziza kumaqela azukileyo kakhulu ngamaxesha athile.
Iincwadi zakho zikhona ezinye zeendaba ezimangalisayo. Kuqhelekile ukuba ucinga ukuba amava anjalo?
Ndikholelwa ukuba ziqhelekile. Ngokutsho kweGallup, abangaphezu kwama-75% baseMelika bakholelwa kwiingelosi - nangaphezulu kokuya kwicawa rhoqo. Oku kuthetha kum ukuba abantu abaninzi bajonga emva kwezinto ezihambelanayo ebomini babo kwaye baqala ukubona enye into-mhlawumbi ukukhuselwa okanye ukuthuthuzela okuza ngexesha elifanelekileyo.
Akulula ukukholisa abantu ukuba abazange babe namava. Ngenxa yoko, inkolelo yam kukuba ezi zinto zenzeka rhoqo, kwaye abaninzi abantu bakhetha ukuba bangaboni esidlangalaleni ngamabali abo.
Ikhasi elilandelayo: Kutheni iingelosi zibanceda abanye kungekhona abanye
Enye into ehlala iphazamisa ngamabali amaninzi kwiingelosi kukuba iingelosi ziza kunceda abantu ngamanye amaxesha imeko engaqhelekanga, njengemoto ephahliweyo kwiqhwa lekhephu. Kucacile ukuba kukho abantu abaninzi abanomdla wokunceda kakhulu. Kutheni ucinga ukuba abanye abantu bancedwa yiengelosi nabanye?
Andiyicingi ukuba kufuneka uyenze nantoni na "ukufaneleka" okanye "ubungcwele." Ndandiva ezininzi zamabali kubantu abaye bamcaphukisa uThixo okanye bahlukana naye xa kufika ingelosi.
Kodwa ndiyakholwa ukuba umthandazo unokutshintsha izinto. Abantu abahlala becela iingelosi ukukhusela, abazama ukuhlala ubomi obuhle kwaye bancedisane, njl njl., Kubonakala benesiqinisekiso sokuncediswa kweengelosi, mhlawumbi kungenxa yoko bayayifumana.
Kodwa kufuneka sikhumbule ukuba izinto ezimbi zenzeke kubantu abalungileyo; Iingelosi aziyi kuhlala zikwazi ukugcina izinto ezinjalo zingenzeki, kuba iingelosi azikwazi ukuphazamisana nentando yethu yokuzikhethela, okanye iziphumo zabanye bafuna ukukhululeka (ininzi yexesha). Kodwa baya kuba nathi ukuze basithuthuzele xa kubandezeleka.
Ngaba uyazixelela enye yeendaba zakho ezithandekayo zelosi - enye ucinga ukuba iyanyanzelisa?
Ibali lendodana yam ndiyithandayo, kunjalo. Yena kunye nabahlobo bakhe babehamba ngelizwe lonke ngobusuku obubandayo obubandayo. Imoto yabo yaqhekeka kwindawo yokutya yecala kwaye mhlawumbi yayiza kubanda khona (abanye abantu babenze loo busuku). Kodwa umqhubi weloli wecala, wawabethela, wabayisa ekukhuselekeni kwaye xa bephuma emotweni baza bajika ukuze bahlawule, wayesekho, kwaye bekunjalo neloli lakhe.
Oku kubangela ukuba:
kwakukho umntu ongaphezu komnye obona into efanayo
kwakukho imeko yongxamiseko kwaye akukho zixhobo zokuhlangula ezazisendleleni
kwakungekho zikhondo ezisele ekhephu ngeloli
Ndiyithande ibali labaqhubi ababini kwinqwelo elincinci elincinci elijikelezayo ngombhobho, kwaye akakwazi ukuhlala.
Ilizwi lafika phezu kwesithethi waza wabathetha kwisiza-moya esincinci, apho bafika ngokukhuselekileyo. Baye bafumanisa njengoko baphuma kwinqwelo-moya eyayivaliwe, kwaye akukho mntu wayesebenza. Ukongezelela, bekunjalo kangangokuba akukho nesikhumulo sezindiza esinokuqhagamshelana nabo.
Umbhali weencwadi ezininzi zeengelosi, uJoan uye wabhala ngonaphakade u-Young, ibali lobomi lomdlali ongumdlali waseLortta Young, elipapashwe nguTomas More Publishers ngoNovemba, 2000. Umdlali we-actress wayefunde iicandelo zeelosi, waza wacela uAnderson njengomfundi wakhe.
Iincwadi eziPhambili zeCape Poker Tournament Strategy